1% Kuvhura Vagadziri & Vatengesi - China 1% Kuvhura Fekitori
Imba Yekushongedza Inopofumadza Windows Sunscreen Polyester Shade Fabric
Maketeni zvinhu zveimba yekutandarira.
Cotton nemachira machira
Jira rejira rekotoni uye jira remucheka rinoratidzirwa nehupamhi hwayo, yakanakisa mweya kukwana uye kupfeka kuramba. Sejira rejira, isarudzo yakanaka. Inogona kutora guruva mumhepo. Kuonekwa kwekotoni nemucheka werinyore zviri nyore uye zvakaisvonaka, zvine simba rakasimba rerunako rwepanyama uye kupfava kupfava.
Kumberi Cartoon Sunshade Rakajeka HDPE Anti UV Mumvuri Mesh Solar Screen Machira
Nekuwanda kweiyi pfungwa yehupenyu hwakasimba, vanhu vakatanga kusimudzira hupenyu hwepanyama we "green home", vachitarisira kuunza maitiro echisikiro mumba yekutandarira, kuunza husingaperi husina simba uye hutano kumhuri. Nhasi, isu tinosuma madiki akateedzana emaketeni kukuudza mashandisiro aungaite iyo yakasarudzika ruvara, kukutora iwe kubva kunetsekana guta, uye kudzokera kune yakasikwa uye yakapusa hupenyu hwemaketeni epamba!
Neruvara rwegirini semuviri mukuru, imba izere nesimba uye kugwinya.
China Mechanism Yakadhindwa Zuva reSunscreen Sunshine Machira eRoller Blinds
Yakakurumbira Sunscreen Blind Mucheka
1.Sunscreen jira moto uye murazvo unodzora, zvivakwa zveveruzhinji zvakakura uye zvivakwa zvehofisi zvinofanirwa kusangana nematanho emoto ekudzivirira moto. Parizvino, zvinoenderana nezvinodiwa zvekuvaka zvakasiyana, machira emumvuri anowanzo shandisa mwenje unodzora B1 nhanho (oxygen index -32, zvivakwa zvese zviripo) uye nhanho yeB2.
2.Iyo saizi inogara iripo. Izvo zvinoshandiswa zvejira reshizha rezuva rinoona kuti hazvisi nyore kuumbika, hazvizovhiringidza, uye zvinochengetedza kugadzikana kwayo.
Double Polyester Roller Blinds Zvikamu Shade 75cm Width Sunscreen Mucheka wehotera
Inoshanda hunhu hwe roller mumvuri jira-UV ichivharira
Sezvo isu tese tichiziva, kana iyo ultraviolet mwenje iri muzuva ichijekesa ganda, zvinokonzeresa kumwe kukanganisa paganda. Zvinoenderana nekutsvagisa, photodermatitis inogona kuitika kana mwaranzi yeultraviolet iri yakaoma, uye erythema, kuchenesa, blister, edema, nezvimwe uye kunyange gomarara reganda. Pamusoro pezvo, kana mwaranzi inonzi ultraviolet iri muzuva ichishanda panhengo yepamusoro yenhepfenyuro, zviratidzo zvakaita sekutemwa nemusoro, dzungu, uye kuwanda kwetembiricha yemuviri, mwaranzi inonzi ultraviolet iri muzuva inoshanda paziso inogona kukonzeresa conjunctivitis uye inogona zvakare kukonzera chirwere chemaziso. Zvakare, kureba kwenguva yakareba kwezuva kuchasimudzira kukwirisa kukwegura uye kupunduka kwemidziyo nemidziyo.
Yakatsemurwa Sunscreen Yakagadzirwa Chitubu Roller Blind Hofisi Maketeni Machira
Vandudza mwenje kusimba
Nzvimbo yechiedza inokanganiswa neChiedza uye kupenya. Mushure mekunge mwenje wapinda mukamuri, mwenje wakasimba unogona kuburitsa zvinoshanda panzvimbo yemukati uye hunhu hwevanhu nezviitiko, zvinogona kukurudzira maitiro epfungwa dzevanhu, kukanganisa maitiro evanhu uye hupenyu hwehupenyu, saka kunatsiridza Indoor mwenje kusimba kwakakosha.
Window Solar Sunscreen Mvura Moto Mhepo Zvinoratidza Mucheka Zip Track Blinds Mucheka
Chiedza Uye Rima Ruvara Vinyl Sunscreen Mucheka
Izvo zvinoshandiswa pamumvuri wezuva zvinowanzodaidzwa kunzi mucheka wezuva uye machira ezuva. Inowanzo kuve yakapfava kutapudza uye inochengeta huwandu hwechiedza mukamuri nepo zuva richidzivirira kupisa. Dhizaina yakanaka yemumvuri dhizaini haingounze chete mhepo-kutonhodza, firiji uye simba rekuchengetedza mukamuri yekuvaka, asi zvakare inounza mwenje wakasununguka kuimba yekuvaka, uye nemhedzisiro yakanaka yekushongedza kwemukati nekunze.